SingForYou.net - iora's Channel
iora 's Channel
Contest Winner WaH....Wahh....wahH...!
Last Login: 01-25-2013 09:27
သ ချင်း ဆို ၀ါ သ နာ ကြီး ပါ တရ် ရှင်. :)
saungnge on Jan 25, 2012
လည်လည် လာပါတယ်ဝေးးးး ချင်းတွေလဲ နားထောင်သွားပါတယ်း)))))))))))))))) အသံချိုချိုလေးနဲ့ ချင်းတွေ များကြီးဆိုပါဦး..........အားပေးနေမယ် နော့ ...း)))))))))))
paradise on Dec 17, 2011
အိမ် မှာ ဘူ မှ မ ရှိ တုံး လာ ချောင်း ပြီး ဖ လား ကြီး ယူ သွား တယ် လို့ အိမ် နီး နား ချင်း တွေ ပြော ပြ လို့ ဖမ်း ဖို့ လိုက် လာ ဒယ်...ဟဲ ဟဲ ဟဲ...ဘယ် ပြေး မ လဲ မိ ရွှေ သဲ......:P ဒီ အ ဆို ရှင် ကို နှစ် သက် ပြီး သား မို့ ထူး ပြီး ပြော မ နေ တော့ ပါ ဘူး နော်.......သီ ချင်း တွေ ဆက် လက် သီ ဆို ရင်း နဲ့ ပျော် ရွှင် ပါ စေ...Iora လေး ရေ.....း)
RoyalCrystallay on Dec 15, 2011
♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫∵∴♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫ အသံကောင်းအဆိုပိုင်တဲ့ စစ် iora လေးဆီ သတိရလို့ အမှတ်တရလာလည်ရင်းမန့်သွားပါတယ်နော်.. ပထမတစ်ခါလာတုန်းကတော့ အရင်ဆုံးပေါ့နော်.. လျိုမြောင်တွေလဲရှိတော့ဝူး ဘယ်ရောက်တွားပါလိမ့်... ဒီတစ်ခါတော့သစ်တုံးတွေကြားလျှောက်သွားခဲ့ပီကွာ.. :D ♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫∵∴♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫∴∵♪♫
paukalay on Dec 13, 2011
Hin! tu khaasaw gyi sleep nay p.. tu myar lar visit twar thal naw.. de mha footprint..ahe..
shwepaleik on Dec 7, 2011
seintoe on Dec 1, 2011
mattayathar on Dec 1, 2011
လာလည်ပါတယ် စစ်ရေ... ပိုင်စိုးမှုဧကရီ နားထောင်ပီးတော့ အသံကောင်း အဆို ပိုင်မို့ အိမ်ထိလာလည်သွားပါတယ်ဗျို့...
paohlay on Dec 1, 2011
come and visit to your channel and listening your nice song....
santimaung on Nov 24, 2011
lar lel twar the sis lay yay arr pay nay mel naw
laylwintthu on Oct 7, 2011
➶∴∵❀∴∵➴∴∵❀∵∴➴∴∵❀∴∵➴∴∵❀∴∵➴∴∵❀∴∵➴∴∵❀∴∵➴∴∵❀∴∵➴❀ ဝေးးးဘူမှလည်လည်လာရတေးဝူးတွ.. နာရင်ဆုံးတွ..... ဟိဟိ စစ်ရေ.. အရင်ဦးဆုံးလည်လည်လာရင်းနဲ့ အဲဒီ လျှိုမြောင်တွေကြားဟိုရှာဒီရှာလုပ်သွားတယ်နော်.. ဘာမှလဲတွေ့ဝူး :D :D :D ➶∴∵❀∴∵➴∴∵❀∵∴➴∴∵❀∴∵➴∴∵❀∴∵➴∴∵❀∴∵➴∴∵❀∴∵➴∴∵❀∴∵➴❀
View All Recordings of iora